Tuesday,3Jan, 2017 1:41 PM
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल आर्मी क्लबको वर्चस्व रह्यो । आर्मीले बक्सिङमा धेरै स्वर्ण जित्यो । बक्सिङतर्फ आर्मीलाई स्वर्ण दिलाउनेमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहिन् पुनम रावल । भरखर १९ वर्ष पुगेकी पुनमको बाजुरादेखि राष्ट्रिय स्वर्णसम्मको यात्रा कम रोचक छैन ।
स्वर्ण पदक जित्दा कस्तो अनुभूति भयो ?
मैले कुनै पनि खेलमा पदकबिना फर्किनुपरेको छैन । तर, यसपालि सिंगो आर्मी क्लबले जित्यो । प्रधानसेनापतिज्यूसमेत खुसीले नाच्नुभयो, छाती गर्वले फुलेको छ भन्नुभयो । यसरी संगठनकै शिर उच्च राख्न सक्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्छु म ।
तपाईँको विशेष अनुभव कस्तो रह्यो ?
यसपटक मनमा ढुकढुक थियो । रनिङ गर्दागर्दै पेट दुख्यो । चेक गर्दा पत्थरी देखियो । रातभरि निद्रा परेन । पेट दुखिरहेकै बेला खेलेँ । अनुभवी खेलाडीसँग म निकै कान्छी, पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलमा भिड्दै थिएँ । स्वर्ण जितेपछि भने मनोबल बढेको छ ।
कहिलेदेखि बक्सिङ खेल्नुभयो ?
पहिला बाजुरामा भलिबल खेल्थेँ । ८ कक्षादेखि बक्सिङ खेल्न थालेँ । बाजुरामा गुरु योगेन्द्र थापाले मलाई बक्सिङमा अगाडि बढाउन निकै सहयोग गर्नुभयो । त्यसपछि नै एक्सपोजर पनि पाएँ ।
सेनामा आउनुअघि पनि खेल्नुहुन्थ्यो ?
सानैदेखि खेलमा रुचि थियो । हाम्रै बाजुराकी निर्मला भारतीले एथलेटिक्समा नाम राखेको सुन्थेँ । म पनि कुनै दिन त्यही उचाइमा पुग्छु भन्ने सपना देख्थेँ ।
सपना पूरा गर्न केके गर्नुभयो ?
म बिहान बिहानै एक्लै दौडन्थेँ । व्यायाम गर्थेँ । कतिपयले गिज्याउँथे पनि । तर, मैले आफ्नो लक्ष्य बिर्सिइनँ । प्रयास जारी राखेँ ।
आर्मीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको अनुभव ?
एउटा खेलाडीले सपना देख्नु र आफै प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो । तर, एक्लो प्रयासमा नियमित व्यायाम, प्रशिक्षण र आहार पुग्दैन । आर्मीमा यी सबै कुरा सम्भव भए । वास्तवमा आर्मीमा प्रवेश नै मेरो खेलजीवनको महत्वपूर्ण मोड बन्न पुग्यो ।
महिला भएर खेल्दाका कठिनाइ केके छन् ?
सुरुसुरुमा म बाजुराबाट बाहिर खेल्न जाँदा मान्छेहरुले कुरा काट्थे । हिजो कुरा काट्ने मान्छेहरु नै आज प्रशंसा गर्छन् । महिनावारीको दुखाइ बढी हुने खेलाडीले अलि समस्या बेहोर्छन् ।
तपाईँको विशेष अनुभव के रह्यो ?
म पहिला दुर्गम, पिछडिएको ठाउँको भएकाले आफूलाई कमजोर ठान्थेँ । तर, यो सोचाइ मात्र रहेछ । प्रमुख कुरा अवसर रहेछ ।
बक्सिङमा तागतबाहेक अरु के कुराले जितिन्छ ?
तागतले मात्र जितिँदैन, ट्याक्टिकल पनि हुनुपर्छ । मनोबल अर्को मुख्य कुरा हो । मैले मनोबल उच्च राख्न कोदाको रोटी र पहाडको चिसो पानी खाएको धाक पनि दिएकी छु कतिपय खेलमा ।
यो जितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान मेरो बाटो खुलेको छ । मुख्य कुरा क्लबको निर्णय हो । दक्षिण एसियालगायत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गएर मुलुकलाई पदक दिलाउन चाहन्छु ।
कहिलेसम्म खेल्न सकिन्छ त ?
हाम्रो परिवेशमा त्यही त होला नि, बिहे नगरेसम्म ।
बिहे गरेपछि नखेल्ने ?
भारतमा मेरी कोम, हाम्रै नेपाल पुलिसकी अनुराधा लामाले विवाह मात्र होइन, बच्चाबच्ची ठूल्ठूला हुँदासम्म पनि खेलिरहनुभएको छ । त्यसका लागि त्यत्तिकै समझदार परिवार पनि हुनुपर्छ ।